Global Voices teny Malagasy » Sina: Olaimpika Maitso sy Mpilalao sarimihetsika ho masoivoho mpiaro ny tontolo iainana eo anivon’ny ONU · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 01 Mey 2008 20:11 GMT 1	 · Mpanoratra Kelly Proctor Nandika avylavitra
Sokajy: Shina, Tontolo_iainana, Zavakanto & Kolontsaina
Dan Beekman ao amin'ny ” Blogging Beijing” no manolotra fampivondronana ireo olan'ny tontolo iainana misy sy izay mbola azo antenanadonne ao Beijing. Nanadihady Fikambanana tsy miankina (ONG) sy mpitarika mpianatra izy momba ny Green Olympics (Lalao Olaimpika maitso), iray amin'ireo teny faneva telo noraisina mandritry ny lalao amin'ity taona ity. Niresadresaka tamin'ingahy Wu Dengming, avy amin'ny toeram-pamokarana angovo miaro ny tontolo iainana ao Chongging , afovoan'i Shina koa izy tsy ela akory izay.
Toy izao no nilazan'ingahy Wu ny fahitany ny ho fiafaran'ny lalao:
Aorian'ny Lalao Olaimpika dia mbola hitohy ity hetsika (fiarovana ny tontolo iainana) ity. Tsy afaka hiverin-dalana i Shina. Fantatry ny olona ankehitriny izay tokony hitranga.. Ireo fikambanana toy ny antsika dia efa manomboka mitana toerana goavana eo anivon'ny fiaraha-monina.
Gaoming Jiang filoha mpitarika ny UNESCO dia niresaka momba ny olana lehibe amin'ny lafiny rano sedrain'i Beijing  tao amin'ny China Dialogue. Maro ireo lalandrano ao Beijing no sempotry ny loto (fifangaroan'ny fanafody fampiasa amin'ny fambolena sy ny diky mihitsy aza), ary tsy fahampian-drano goavana. Toy ny fijerin'ny manam-pahaizana manokana mihitsy ny azy amin'ny resaka fanadiovana, miaraka amin'ny fehinteny farany,
… ny fikarakarana ny tontolo iainana dia tsy maintsy ampifandrindrana lalana amin'ny fanamaivanana ny fahantrana sy famoronana harena. Ny fanamby atrehina amin'ny fiarovana ireo loharano dia olana ivelany fotsiny ihany. Tokony handray andraikitra isika hanampy ireo faritra mba hamaha ny olana momba ny angovo amin'ny fampiasana ny hai-rahan'ny famokarana entona methane sy ny fanapariahana kokoa ny foto-drafitrasa. Tokony hanampy amin'ny resaka fahadiovana koa isika ary hanangana toby sy toerana fikarakarana ny rano. Antoka ho an'ny faritra izany lba hananany zavamaniry manara-penitra, mamokatra rano ampy, ary izany dia miantoka koa ny fahadiovan'ny rano mikoriana mankany anatin'ny toby fitobian-drano.
Ao amin'ny Treehugger , i Alex Pasternack no mitondra fanamarihana mikasika ny fanapahan-kevitry ny Fandaharan'asan'ny firenena mikambana ho amin'ny fampandrosoana (PNUD) hametraka Olo-malaza Sinoa ho masoivohon'ny Tsara Sitra-po mba hanondrotra ny tontolo iainana. Ilay mpilalao sarimihetsika Zhou Xun namiratra tao amin'ny Balzac sy ilay Sinoa kely mpanjaitra (Balzac and the Little Chinese Seamstress) sy ilay horonantsary Sinoa ny reniranon'I Suzhou . Hoy izy …
Ao anatin'ny firenena iray ahitana fijery momba ny fiarovana ny tontolo iainana toa tsy mifandanja velively amin'ny fahatsiarovan-tenan'ny mponina (indrindra eny anivon'ny tanora !), dia angamba ho lalana iray isan'ny mahomby ho fampitan-kafatra ny fampiasana anarana malaza. Ankoatr'i Gong Li (na Leo, anaty hafatra iray avy any Honk Kong), dia vitsy ihany ireo mpanakanto ao Shina no nivoitra noho ny safidiny hiaro ny zava-maitso. Indrisy. Ny fanentanana iarahana amin'ny mpanakanto dia mety hanamaivamaivana ny governemanta.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2008/05/01/922/
 Green Olympics : http://blog.seattletimes.nwsource.com/bloggingbeijing/
 olana lehibe amin'ny lafiny rano sedrain'i Beijing: http://www.chinadialogue.net/homepage/show/single/en/1929-Saving-Beijing-s-reservoirs
 hametraka Olo-malaza Sinoa ho masoivohon'ny : http://www.treehugger.com/files/2008/04/un_zhou_xun_green_ambassador.php
 reniranon'I Suzhou: http://www.imdb.com/title/tt0234837/
 fijery : http://en.beijing2008.cn/12/12/greenolympics.shtml
 fahatsiarovan-tenan'ny mponina : http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2008-04/04/content_6592224.htm
 indrindra : http://www.treehugger.com/files/2007/08/china_cars.php
 tanora : http://www.britishcouncil.org.cn/climatecool/en/consumer_youth.html
 Gong Li : http://www.treehugger.com/files/2007/03/gong_li.php